Askarigii dilay George Floyd oo xabsiga laga sii daayay | Wardoon
Home Somali News Askarigii dilay George Floyd oo xabsiga laga sii daayay
Askarigii dilay George Floyd oo xabsiga laga sii daayay
Maxkamad kutaala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa damaanad kusii deysay sargaal katirsanaa ciidanka booliiska Mareykanka oo si arxadan daro u dilay George Floyd oo ahaa nin Madowga Mareykanka kasoo jeeda.
Dilka sargaalkan u geestay ninka Madowga ah oo muuqaal laga duubay ayaa caro badan ka abuuray guud ahaan caalamka, waxaana Mareykanka gudihiisa dilka ka dhaliyay banaan baxyo rabshado watay oo dhaliyay khasaarooyin kala duwan.
Derek Chauvin oo ahaa sargaalka dilka geestay ayaa xabsiga looga sii daayay 1-milyan dollar oo damaanad ah, waxa uuna sargaalkan banaanka joogi doonaa inta laga gaarayo bisha Maarso ee sanadka soo socda ee 2021-ka.
Waxaa sidoo kale maxkamada damaanad kusii deysay sadex askari kale oo gacan ku siiyay sargaalkan dilkii loo geestay George Flyd oo xiligii la dilayay aan wadan wax hub ah oo sababi karay in la dilo.
Sargaalkan iyo askarta la eedeesan ayaa laga eryay shaqada ciidanka booliiska, waxa ayna si caadi ah u joogi doonaan guryahooda iyaga oon shaqo heyn inta laga gaarayo maxkamadeyntooda sanadka dambe.
Previous articleQaar kamid ah ragii Weeraray Westgate oo maxkaad lakeenay +SAWIRRO
Next articleBarlamaanka Itoobiya oo xiriirka u jaray maamulka Tigree-ga
DAAWO:-Ciidamada Galmudug oo kudhawaaday Xaradheere
Kheyre oo Dhuusamareeb tagay +SAWIRRO